Amisom oo ka xun askar gaar ah oo Uganda u disreyso ilaalinta xarrumaha UN-ka ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Afhayeenka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM Col. Cali Aadan Xumud ayaa ka hadlay ciidamo gaar ah oo dowladda Uganda sheegtay iney u direyso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si u ilaaliyaan xarrumaha Qaramada Midoobay.
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Col. Cali Aadan Xumad ayaa sheegay ineysan AMISOM waxba kala socon, isla markaana aanu AMISOM quseyn ciidamo dalka Uganda oo AMISOM ka mid ah sheegay inuu u dirayo Soomaaliya si ay u ilaaliyaan xarrumaha Qaramada Midoobay.
“Arrintan waa mid aan AMISOM quseyn, haddii Uganda soo direyso ciidammo ilaalo ka qabta xarumaha UN-ka ay Muqdisho ku leeyihiin” ayuu yiri Col. Xumud oo la hadlay VOA.
Afhayeenka AMISOM ayaa qorshaha Uganda ku tilmaamay mid aan la dhayalsan Karin, wuxuuna arrintaas ku tilmaamay mid ka dhigeysa in laga aamin baxay AMISOM.
“Warka kazoo yeeray Uganda waana mid aan la dhayalsan karin waayo waxaa jiray wada-hadal caynkaas ah, balse AMISOM haddii ay nabadgelyo u joogto in ciidan ka gaar ah lasoo diro waxay noqoneysa mid AMISOM lagaga aamin-baxayo,” ayuu yiri Col. Xumad.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay adkaan doonto sida ay ula shaqeeyaan ciidamada gaarka ah ee sugi doona ammaanka Hey’adaha Qaramada Midooey, waxaana uu xusay in arrintan hadii xaqiiqo noqoto ay tahay arrin weyn.
Milateriga Uganda ayaa shaaca ka qaaday in ay dhowaan Soomaaliya usoo dirayaan cidamo gaaraya 410 askari, kuwaasoo ilaalinaya dhismooyinka Qaramada Midoobay ku leedahay Muqdisho.
Ciidamadan ka socda Uganda ee loo dirayo Soomaaliya ayaa loo bixiyey magaca “United Nations Guard Unit”, waxaana tegesta ciidamadaas ee Soomaaliya xaqiijiyey afhayeenka Milateriga Uganda Lt. Col Paddy Ankunda.